weel caag ah
saftay & xiritaanka caaga
Child saftay adkaysta
Suuqa Dhalooyinka Pharmaceutical - Worldwide Industry Falanqaynta, Isbeddellada Size, Saadaasha 2016 - 2024
waqti Post: Aug-30-2018
suuqa ee dhalooyinka dawooyinka ee Europe waxa lagu gartaa ay helaan gobolada kala duwan iyada oo ay goob istiraatiiji ah in Peninsula guulo ka. Thanks to dhawaanshaha juqraafi iyo xeebaha dheer ee dalka this, iskala marayo Badweynta Atlantic iyo Badda Mediterranean-ka, waxa ay ha ...Read more »
Noocyada kala duwan ee balaastigga
Hel faham qoto dheer oo ka mid ah noocyada kala duwan ee balaastigga iyo taas oo ka mid ah ka dhigaysa haamaha ugu wanaagsan ee aad wax soo saarka. Waxaan rajaynaynaa in this page kaa caawin doona inaad ka soo fagid xuruufta baakooyinka, baaro waxtarka bacyaal kala duwan, oo loo ogaado waxa sifooyinka waa muhiim in aad packagi saarka ...Read more »
Waa maxay dhameystiray
WAA MAXAY A 'Finish'? weelka A ayaa ku dhameysatay qoorta go'aamiyo xajmiga iyo nooca xiritaanka loo baahan yahay si loo gaaro seal a sax ah. weelka A iyo cap u dhiganta waa in uu leeyahay gool tallaabadaas. Ujeedooyinka our, waxaan baari doona laba Hababka kala duwan ee gool iyo sida loo aqoonsado kasta. The ...Read more »